Immisa garaac daqiiqaddii ayaa caadi u ah bisad? | Bisadaha Noti
Immisa garaac daqiiqaddii ayaa caadi u ah bisad?
Laura Torres sawir qaade | | Riyooyin
Bisadu waa mid dhogor badan oo marka aad gacanta saarto laabta si aad u dareento garaaca wadnaheeda, waxa ugu horeeya ee aad dareentaa waa inay garaacdaa xawaare aad uga dheereeya kan aadanaha. Wax badan sidaa darteed layaab malahan inaad la yaabto haddii taasi caadi tahay, ama haddii ay wax dhab ahaan isaga ku dhacayaan oo aad iska indha tirto.
Tilmaamkani waa wax weyn in la sameeyo waqti ka waqti, maxaa yeelay waxay faa'iido u leedahay in la ogaado haddii saaxiibkeen afarta lugood leh uu qabo cudur. Laakiin dabcan, taas sidoo kale waa muhiim in la ogaado inta garaac ee daqiiqadii caadi u tahay bisadda. Marka waa tan aan ka hadli doonno xiga.
1 Waa maxay heerka garaaca wadnaha ee bisad?
1.1 Garaaca daqiiqaddii bisad maahan waxa kaliya ee laga fiirsado
1.2 Sideen ku cabirayaa cabirradooda bisadayda?
2 Aaway xididka xididka iyo sideen u cabiraa garaaca wadnaheyga bisad?
3 Maxay bisadeyda u yeelan kartaa garaaca wadnaha oo aan caadi ahayn?
4 Goorma ayaa loo tagayaa dhakhtarka xoolaha?
Waa maxay heerka garaaca wadnaha ee bisad?
Garaaca wadnahaaga bisadu wuxuu in badan ku xirnaan doonaa da'da iyo baaxadda. Heerka garaaca wadnaha ee bisadu waa inta udhaxeysa 140 ilaa 220 garaac ama garaac daqiiqadii. Marka laga hadlayo bisadaha, garaaca wadnaha ayaa ka sarreeya kan eeyaha. Eeyaha dhexdooda tani waxay u dhaxaysaa 60 iyo 180 garaac daqiiqadii.
Caadi ahaan marka kittens-yada ay ka yar yihiin dheef-shiid kiimikaadkoodu waa dhaqso, sidaa darteed, garaaca wadnahoodu wuu sarreeyaa. Taasi waa, wadnahaaga ayaa garaaca marar badan daqiiqadii. Iyo markaad sii kordheysid dheef-shiid kiimikaadkaaga ayaa gaabis ah, iyo aragti ahaan, garaaca wadnahaaga ayaa sidoo kale hoos u dhacaya.
Garaaca daqiiqaddii bisad maahan waxa kaliya ee laga fiirsado
Marka horeba, wuxuu kuu sheegayaa inuu isagu yahaygaraaca wadnaha waa halbeeg aasaasi u ah jir ahaaneed marka la qiimeynayo sida ay bisadadu u caafimaad qabto. Si kastaba ha noqotee, maahan kaliya halbeegga jir ahaaneed ee ay tahay in lagu xisaabtamo.
Garaaca garaaca wadnaha ee bisaddaadu leedahay, waa inaad sidoo kale tixgelisaa:
Inta jeer ee neefsashada (FR): neefsashada 20-42 / daqiiqo)
Waqtiga dib-u-buuxinta kaabsalka (TRC): <2 ilbidhiqsi
Heerkulka jirka (Tª): 38-39,2 ºC
Cadaadiska dhiig karka (PAS): 120-180 mm Hg
Cadaadiska halbowlaha wadnaha (PAM): 100-150 mm Hg
Cadaadiska dhiigga ee dhiiga (PAD): 60-100 mm Hg
Soo saarida Kaadida (KUDHACDA KADHII): 1-2 ml / kg / h
Sideen ku cabirayaa cabirradooda bisadayda?
Laga soo bilaabo xuduudaha kor ku xusan waxaad si raaxo leh uga cabbiri kartaa waqtiga dib-u-buuxinta qalliinka, heerka neefsashada iyo heerkulka guriga haddii loo baahdo.
El waqtiga dib-u-buuxinta waxaa lagu arkaa ciridka bisadeena. Markaad far ku riixdo cirridka, aagga cadaadiska kujira ayaa cadaan noqonaya. Waxa inala gudboon waa inaan indha indheynno waa intee in le'eg ayay ku qaadanaysaa inay mar labaad isu rogto casaan.
La heerka neefsashada Waxaad ku arki kartaa adoo fiirinaya laabta bisadaada. Si qumman u dhig afarta lugood, ama dhinac u jiifso. Marka aad kuhesho booskaas, fiiri waqtiyada uu dhacayo, yacni, waqtiyada xabadka ay bararayaan. Maaddaama aan ogahay inay adag tahay in bisad weli daqiiqad lagu haysto booskaas, waxaan kuu sharaxayaa si kale. Qaado saacad-joojin, midka lagu daray taleefankaaga casriga ah ayaa kaa caawin doona, oo tiri wakhtiyada laabtaadu bararayaan 15 ilbidhiqsi. Ku dhufo tirada neefsashada aad qaadaneyso waqtigaas afar jeer waxaadna leedahay neefsashada bisaddaada daqiiqaddiiba.
La heerkulka Waad ku cabbiri kartaa haddii loo baahdo heerkulbeeg leh caarad jilicsan. Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho wax yar oo jelly ah oo batrool ah tan iyo inta caarada heerkulbeega caaradiisa la gelinayo dabadeeda si ay u qaadato heerkulka jidhkeeda. Waa wax aysan inta badan jeclayn isla markaana ku adkeyneysa iyaga, sidaa darteed kuma talinayo inaad qaadato heerkulkiisa illaa dhakhtarkaaga xoolaha uu u arko inuu si adag lagama maarmaan u yahay.
Marka laga hadlayo garaaca wadnaha waxa maskaxda ku soo dhacaya waa inaan gacanta saarno laabtiisa, dhanka bidix inta u dhexeysa feeraha saddexaad iyo afaraad, innagoo raadineyna qalbiga. Laakiin runtii way fududahay in la cabbiro garaaca wadnaha ee xididka saphenous.
Aaway xididka xididka iyo sideen u cabiraa garaaca wadnaheyga bisad?
Meesha ugu raaxada badan ee lagu cabiro garaaca wadnaha xididka dhiigga waa iyada oo bisadeena lugaheeda ku dhajineysa afarta lugood, in kasta oo aan sidoo kale ku qaban karno bisadda oo jiifsatay dhinac dhinac dhinac ah.
Markaad bisadaada ku haysatid mid ka mid ah meelahan waxaad aadeysaa mid ka mid ah lugaha dambe, bowdadiisa. Gacantaada suulka saar bowdada kore iyo afarta farood bowdyaha dushiisa. Waxaad si fiican u dareemi doontaa garaaca wadnaha. Sida heerka neefsashada oo kale waxay qaadataa waqti ah 15 ilbidhiqsi iyo tirada garaaca ee ay ku siinayso ku dhufo afar.
Maxay bisadeyda u yeelan kartaa garaaca wadnaha oo aan caadi ahayn?
Garaaca wadnaha bisad waxaa saameyn ku yeelan kara dhowr arrimood. Si kastaba ha noqotee, tani had iyo jeer macnaheedu maahan in kan yar uu qabo dhibaatooyin wadnaha ah. Waa kuwan liiska xaaladaha soo noqnoqda ee ay bisadeena ku yeelan karto garaaca wadnaha oo aan caadi ahayn:
Haddii aad ku sugan tahay xaalad ka mid ah diiqada
Waxay leedahay qandho.
Waxay leedahay obesidad
Haddii aad sonkorow qabto
Haddii aad qabtid wax dhibaato ah oo wadnaha ah ama wareegga dhiigga ah.
Haddii aad fuuqbaxday.
Haddii aad qabto xanuun.
Hadaad rafaaddo sumowga ama sumowga.
Goorma ayaa loo tagayaa dhakhtarka xoolaha?
Mararka qaar ma sahlana gabi ahaanba in la ogaado haddii bisadu wadno xanuun leedahay iyo inkale, maadaama ay doofaarku tahay khabiir marka ay timaado qarinta xanuunka. Hadda, sidaan ku sheegay qaybtii hore, garaaca wadnuhu maahan waxa keliya ee ay tahay inaan tixgelinno.
Aad xaruntaada caafimaadka xoolaha ee aad ku kalsoon tahay haddii aad ogaato in bisaddaadu ay tahay mid caajis badan, oo aan taxaddar lahayn, oo dabacsan, aan cunin ama cunin wax ka yar sidii hore, ama ay wax u cunayso si gariir ah. Xitaa haddii aad cabto biyo xad dhaaf ah ama aadan cabin gebi ahaanba. Sababta ayaa ah marka bisaduhu aysan fiicnayn mid ka mid ah sababaha ugu horeeya ee inbadan oo ka mid ahi ay tahay in ay niyadda badan yihiin, in ka badan ayay hindhisaan. Xitaa way ku xoqin kartaa markaad isku daydo inaad taabato ama qabato, markii aysan horey u sameynin. Sababta kale ee wadatashiga waxay noqon kartaa markay ku guuri waayaan sanduuqooda ciidda oo ay ku sameeyaan meelaha kale ee guriga, dad badan ayaa u maleynaya in xayawaanku u sameeyo si uu uga xanaaqo, laakiin taasna waa ka fog tahay, waa taa tilmaan u ah in wax aysan ahayn midig bisaddaada.
Sidoo kale hadaad ogaato bisadaada lumiyo iskuxirnaanta lugaha markaad socotid, candhuufta xad dhaafka ah, matagaysa xumbo ama shuban, degdeg ugu tag dhaqtarka xoolaha.. Waxay noqon kartaa kiis sakhraansan ama sumayn mana jiro waqti lagu lumiyo. Waana iyada oo aan la dhihin haddii ay tahay bisad yar oo sanad ka yar wax walba waxay noqonayaan kuwo deg deg ah maxaa yeelay waxay u nugul yihiin wax kasta oo iyaga ku dhaca
Waxaan rajeynayaa in qoraalkani faa iido kuu lahaa. Xusuusnowna inaadan waqtiga u dhaafin. Noloshaadu waxay ku jiri kartaa khatar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Riyooyin » Immisa garaac daqiiqaddii ayaa caadi u ah bisad?
samee 2 sano
Waa inaad u geysaa dhakhtarka xoolaha sida ugu dhakhsaha badan. Isaga kaliya ayaa kuu sheegi kara dhab ahaan cudurka uu qabo, iyo sida loo daweeyo.
Jawaab Monica Sanchez
Wax walba bisaddaada
U ilaali bisaddaada sida uu ugu qalmo talooyinkaan aan soo jeedinno oo uu jeclaan doono. Intaas waxaa sii dheer, waad ka faa'iideysan kartaa qaar ka mid ah dalabyada hadda la heli karo:
Maxaan u jecel nahay bisadaha
Bisadda Bengali, dhogorta leh muuqaal duur joog ah iyo qalbi aad u weyn
Hel qodobbada ugu dambeeyay ee ku saabsan bisadaha.